“ငှရှောနညျး လြှို့ဝှကျခကျြမြား” - ONE DAILY MEDIA
၁။ ကိုယျ့ပနျးတိုငျကို စဉျးစားလိုကျတိုငျး ပြျောရှငျပါစေ
ဒါမှလညျး ပိုလုပျခငျြစိတျမြားပွီး satisfied ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
၂။ မအောငျမွငျတဲ့သူတှရေဲ့ ဘေးမှာ အိမျမကျသူခိုးတှေ ရှိနတေတျပါတယျ
တခုခုလုပျတော့မယျဆို ဘေးကနေ ဒါကတော့မဖွဈနိုငျဘူး ၊ မငျးမလုပျနိုငျဘူးဆိုပွီးပွောတဲ့ အိမျမကျသူခိုးတှေ ရှိနတေတျပါတယျ။ ဆနျ့ကငျြဘကျ အောငျမွငျတဲ့သူတှေ ဘေးမှာတော့ အိမျမကျကို အမွဲ အားပေးတဲ့ ကူညီတဲ့ အပွု့သဘောဆောငျတဲ့သူတှေ ရှိနတေတျတယျ။ ဒါကွောငျ့ အိမျမကျသူခိုးတှေ အနားမှာ မရှိပါစနေဲ့။ မပတျသကျမိပါစနေဲ့။
ကိုယျပွောတဲ့စကားက ကိုယျ့ကိုဆုံးဖွတျပေးပါတယျ။ “ဒီနတေ့ော့ကံမကောငျးဘူးကှာ”။ “ဒီနအေ့ဆူခံရပွနျပွီ”။”အဆငျမပွလေိုကျတာကှာ” မိတျဆှရေော? ဘယျလိုငွီးတတျလဲ? အောငျမွငျတဲ့သူတှကေ အပွုသဘော ဆောငျတဲ့ စကားပဲပွောတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စကားလုံးတှမှော စှမျးအားတှရှေိလို့ပါ။ တစုံတယောကျက အဆငျပွလေားမေးရငျ အကောငျးဆုံး အဆငျပွပေါတယျ။ အခွအေနကေောငျးပါတယျ အစရှိတာတှပေဲ ဖွပေါ။
၄။ ဖွဈခငျြတာကို ခဏခဏစဉျးစားပါ
ကိုယျ့အိမျမကျအကွောငျးကို ကိုယျ့ဟာကို ပွနျ remind လုပျပါ။ စဉျးစားတိုငျးလညျးပြျောရှငျပါစေ။
နောကျတခုက facebook ပျေါက အဆိုးမွငျစာတှကေို လုံးဝမဖတျပါနဲ့။ သရောစာတှေ၊ ပကျြလုံးတှေ၊ negative စာပတှေကေို ရှောငျပါ။ အဆိုးတှဖေတျပွီး အဆိုးတှေ တှေးရငျ အဆိုးတှရေပါလိမျ့မယျ။ အတှေးအချေါတှေ မှနျအောငျတှေးပါ။ မှားနရေငျ ဘယျလိုပွငျမလဲ? စာဖတျပါ။ စိတျဓာတျခှနျအား ရမဲ့စာတှေ မြားမြားဖတျပါ။
၆။ ပညာပေး video file တှေ ၊ စာပဟေောပွောပှဲ ခှတှေေ တနတေ့ခု ကွညျ့ပါ
အကောငျးတှသော ပတျဝနျးကငျြမှာ ဝနျးရံနပေါစေ။
၇။ Seminar တှေ၊ ဟောပွောပှဲတှေ ခဏခဏ တကျရောကျပါ
အဲ့လို တကျရောကျခွငျးဖွငျ့ အကောငျးမွငျစိတျလေး၊ ကောငျးတဲ့အတှေးလေး ရရှိနိုငျပါမယျ။ အဲ့လိုပတျဝနျးကငျြ ရဲ့ အကောငျးမွငျမူ ရိုကျခတျတဲ့ ကွိမျနှုနျးက အရမျးမြားရငျ တနတေ့ာလုပျရှားနတေဲ့ စိတျအတှေးအချေါ ကွိမျနှုနျးတှပေါ လိုကျပွီး ပွောငျးလဲသှားပါလိမျ့မယျ​။
၈။ သူမြားအောငျမွငျမှုကို ခြီးကြူးပါ
ကိုယျ့ခြီးကြူးသံကွောငျ့ သူတို့မှာ ပွောငျးလဲမှုတှေ အမြားကွီး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ပိုကွိုးစားလာနိုငျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ အောငျမွငျသူတယောကျကို တှတေ့ာနဲ့ ဝမျးမွှောကျဝမျးသာ အသိအမှတျပွုပေးဖို့လိုပါတယျ။ ကိုယျရဲ့ အသိအမှတျပွုတဲ့ တုနျခါမှုလှိုငျးက အခွားတယောကျဆီ ကူးစကျသှားနိုငျပါတယျ။ ကူးစကျသှားတဲ့သူလညျး အကောငျးမွငျလှိုငျးရသလို ပို့လှတျလိုကျတဲ့ သူကိုယျတိုငျလညျး အဲအတိုငျး ပွနျလညျရရှိပါတယျ။ အမွငျ့ကို ဆှဲချေါမဲ့ သူငယျခငျြးမြိုး လိုပါတယျ။
၉။ စိတျဓာတျအဆငျ့အတနျးမွငျ့သူ၊ ဝငျငှမွေငျ့မားသူ ၊ အိမျမကျကွီးသူတှနေဲ့ မိတျဆှဖှေဲ့ဖို့လိုပါတယျ။
ကိုယျ့ကို ကိုယျရဲ့ အိမျမကျတှကေို “ခငျဗြား လုပျနိုငျမယျ” လို့ ပွောတဲ့ သူငယျခငျြးတှေ မိမိလိုပဲ အိမျမကျကွီးတဲ့ မိတျဆှေ အနားပဲနပေါ။
၁။ ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကို စဉ်းစားလိုက်တိုင်း ပျော်ရွှင်ပါစေ
ဒါမှလည်း ပိုလုပ်ချင်စိတ်များပြီး satisfied ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၂။ မအောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့ ဘေးမှာ အိမ်မက်သူခိုးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်
တခုခုလုပ်တော့မယ်ဆို ဘေးကနေ ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး ၊ မင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောတဲ့ အိမ်မက်သူခိုးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက် အောင်မြင်တဲ့သူတွေ ဘေးမှာတော့ အိမ်မက်ကို အမြဲ အားပေးတဲ့ ကူညီတဲ့ အပြု့သဘောဆောင်တဲ့သူတွေ ရှိနေတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်မက်သူခိုးတွေ အနားမှာ မရှိပါစေနဲ့။ မပတ်သက်မိပါစေနဲ့။
ကိုယ်ပြောတဲ့စကားက ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ “ဒီနေ့တော့ကံမကောင်းဘူးကွာ”။ “ဒီနေ့အဆူခံရပြန်ပြီ”။”အဆင်မပြေလိုက်တာကွာ” မိတ်ဆွေရော? ဘယ်လိုငြီးတတ်လဲ? အောင်မြင်တဲ့သူတွေက အပြုသဘော ဆောင်တဲ့ စကားပဲပြောတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စကားလုံးတွေမှာ စွမ်းအားတွေရှိလို့ပါ။ တစုံတယောက်က အဆင်ပြေလားမေးရင် အကောင်းဆုံး အဆင်ပြေပါတယ်။ အခြေအနေကောင်းပါတယ် အစရှိတာတွေပဲ ဖြေပါ။
၄။ ဖြစ်ချင်တာကို ခဏခဏစဉ်းစားပါ
ကိုယ့်အိမ်မက်အကြောင်းကို ကိုယ့်ဟာကို ပြန် remind လုပ်ပါ။ စဉ်းစားတိုင်းလည်းပျော်ရွှင်ပါစေ။
နောက်တခုက facebook ပေါ်က အဆိုးမြင်စာတွေကို လုံးဝမဖတ်ပါနဲ့။ သရောစာတွေ၊ ပျက်လုံးတွေ၊ negative စာပေတွေကို ရှောင်ပါ။ အဆိုးတွေဖတ်ပြီး အဆိုးတွေ တွေးရင် အဆိုးတွေရပါလိမ့်မယ်။ အတွေးအခေါ်တွေ မှန်အောင်တွေးပါ။ မှားနေရင် ဘယ်လိုပြင်မလဲ? စာဖတ်ပါ။ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ရမဲ့စာတွေ များများဖတ်ပါ။
၆။ ပညာပေး video file တွေ ၊ စာပေဟောပြောပွဲ ခွေတွေ တနေ့တခု ကြည့်ပါ
အကောင်းတွေသာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဝန်းရံနေပါစေ။
၇။ Seminar တွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေ ခဏခဏ တက်ရောက်ပါ
အဲ့လို တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် အကောင်းမြင်စိတ်လေး၊ ကောင်းတဲ့အတွေးလေး ရရှိနိုင်ပါမယ်။ အဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင် ရဲ့ အကောင်းမြင်မူ ရိုက်ခတ်တဲ့ ကြိမ်နှုန်းက အရမ်းများရင် တနေ့တာလုပ်ရှားနေတဲ့ စိတ်အတွေးအခေါ် ကြိမ်နှုန်းတွေပါ လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်​။
၈။ သူများအောင်မြင်မှုကို ချီးကျူးပါ
ကိုယ့်ချီးကျူးသံကြောင့် သူတို့မှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပိုကြိုးစားလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အောင်မြင်သူတယောက်ကို တွေ့တာနဲ့ ဝမ်းမြှောက်ဝမ်းသာ အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ တုန်ခါမှုလှိုင်းက အခြားတယောက်ဆီ ကူးစက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်သွားတဲ့သူလည်း အကောင်းမြင်လှိုင်းရသလို ပို့လွှတ်လိုက်တဲ့ သူကိုယ်တိုင်လည်း အဲအတိုင်း ပြန်လည်ရရှိပါတယ်။ အမြင့်ကို ဆွဲခေါ်မဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုး လိုပါတယ်။
၉။ စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်းမြင့်သူ၊ ဝင်ငွေမြင့်မားသူ ၊ အိမ်မက်ကြီးသူတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ့်ကို ကိုယ်ရဲ့ အိမ်မက်တွေကို “ခင်ဗျား လုပ်နိုင်မယ်” လို့ ပြောတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ မိမိလိုပဲ အိမ်မက်ကြီးတဲ့ မိတ်ဆွေ အနားပဲနေပါ။